Moya Imaski yaseTshayina eLahliweyo eNyucuka yeFliter yokuzifunxa umzi-mveliso wemaski kunye nababoneleli |Zhongxing
Ngaphezulu kweminyaka eli-10 yophuhliso, iqela leZHONGXING ligxile ekuveliseni nasekuthumeleni kumazwe angaphandle uthotho lweemveliso zeMedical Mask.
Sijonge phambili ekwakheni ubudlelwane boshishino
Imaski yokucoca ukuzifunxa
Imaski ekhuselayo ye-self-priming inezi mpawu zilandelayo:
1.Uluhlu lwangaphandle lwemaski lwenziwe nge-polypropylene engekho inetyhefu, eyona nto inqabileyo yamanzi engenanto engalukiweyo;
2.Umaleko wangaphakathi wemaski wenziwa ikakhulu ngezinto ezingenatyhefu zepolypropylene, i-ES umqhaphu womoya oshushu kunye nelaphu le-viscose elingalukwanga elinokungena komoya obusondeleyo;
3.Isihluzo semaski samkela iileyiti ezimbini zelaphu elingalukwanga elinyibilikayo elithe lanyangwa ngombane, kwaye ukusebenza kakuhle kokucoca ibhaktiriya kufikelela ngaphezulu kwe-95%;
4.Ikliphu yempumlo yeplastiki kumzimba wemaski inokulungelelaniswa ngokuthanda ngexesha lenkqubo yokunxiba, kwaye ifaneleka ngakumbi kwaye ikhululekile ukuyinxiba;
5.Uyilo lwe-mask-dimensional-dimensional, ukuchasana nokuphefumla ngexesha lokunxiba kungaphantsi kwe-110Pa, akugxininisi;
6.Le mveliso isebenzisa itekhnoloji yokucinezela i-edge engenamthungo kunye netekhnoloji ye-welding ye-ultrasonic ukwenza imaski ithambile, yomelele kwaye ihle.
Iimaski ezikhuselayo zokucoca iimaski zisetyenziswa ikakhulu ukukhusela abantu kwindawo apho umoya ungcoliswe ngamasuntswana angenawo ioyile anjengothuli, umsi, inkungu kunye neemicroorganisms.Iindlela eziphambili zokusetyenziswa zezi:
Ukusebenzisa indlela ye-N9501 ye-headband series mask:
1.Vula ipakethe kwaye ukhuphe imaski, ubambe icala lemaski ngekliphu yempumlo, yenza i-clip yempumlo phezulu, kwaye i-headband iya kuxhoma ngokwemvelo, njengoko kuboniswe kuMfanekiso 1 ngezantsi;
2.Nxiba imaski, faka isilevu ngaphakathi kwemaski ukuze isondele ebusweni, sebenzisa isandla esinye ukudlula kwiibhanti ezimbini zentloko, emva koko usebenzise esinye isandla ukutsala ibhande lentloko elisezantsi ngasemva kwentloko kwaye ubeke. ngayo entanyeni , Njengoko kuboniswe kuMfanekiso 2 ngezantsi;
3.Tsala i-headband ephezulu ngasemva kwentloko kwaye uyibeke phezulu kweendlebe zomva wentloko, njengoko kubonisiwe kuMfanekiso 3 ngezantsi;
Ulwimi oluthethwayo:IsiNgesi, isiTshayinae
Igama lemveliso Imaski ekhuselayo yokucoca isihluzi
Umzekelo Uhlobo lwe-N9501 Earband/N9501 Uhlobo lwe-Headband
Igama lemveliso Shaohu
Izinto eziphathekayo ilaphu lepolypropylene non-elukiweyo, ES umqhaphu womoya oshushu
Izinga lokuhluza ibhaktheriya ≥95 ipesenti
Izinga lokuhluza amasuntswana angeyooli ≥95%
Iyahambelana nenani eliqhelekileyo GB 2626-2019
Ukupakisha ukucaciswa isikhwama sephepha-yeplastiki, isiqwenga se-1 esikhwameni
Umsebenzi Thintela amasuntswana angeyo-oyile afana nothuli, umsi, inkungu kunye ne-microorganisms
Ngaphambili: I-Cotton Swab elahlayo, i-Biodegardable Eco-friendly kunye nentonga ye-bamboo
Okulandelayo: Amaqhuma eCotton Bud iMveliso eNtsha yeCotton Bud 200pcs biodegradable Cotton Swab
Isigqubuthelo soMlomo esilahlwayo
IMaski eLahlwayo kwezonyango
IMaski ePinki eLahlayo
Imaski yokuvala inzala
Imaski yokuNcisa inzala eneZintlu ezintathu
Iimaski ezi-3 eziLahlwayo ngeFda, Umsebenzi Wemaski, 3 Gcoba iMaski yoBuso eLahliweyo, Mask Njengobuso, Ukulahlwa kweHalf Mask Respirator, Ffp1 Imaski elahlayo,